बाइक टोप र स्केट टोप कस्तो भिन्नता छ? - Jomo प्रौद्योगिकी कं, लिमिटेड
एउटा साधारण प्रश्न सोध्छन् जो छ लग मा स्पष्ट फरक देखि "बाइक टोप र स्केट टोप भिन्नता के?" ठेस, बाइक र स्केट हेलमेट वास्तवमा functionally धेरै तरिकामा फरक छन्, र तपाईं यदि तपाईं निश्चित गर्न चाहनुहुन्छ तपाईंको चढेर लागि हेलमेट को सही प्रकार किन्न बिजुली स्केटबोर्ड .
तपाईं नियमित बाइक टोप र एक आफ्नो टाउको को पछाडि सुरक्षा गर्न डिजाइन बीच कवरेज मा फरक देख्न सक्छौं। छवि क्रेडिट: द Sweethome
बाइक हेलमेट र स्केट हेलमेट बीच एक प्रमुख फरक वास्तवमा आफ्नो खास डिजाइन सम्बन्धित छ। स्केट हेलमेट, परंपरागत राउन्ड र चिल्लो छन् जो आफ्नो टाउको को कवर। तिनीहरू आफ्नो टाउको को पछाडि भूमि सक्छ skateboarders सामान्यतः लिन, कि फल्स विरुद्ध सुरक्षा गर्न डिजाइन किनभने यो छ। यसको विपरीत, bikers शायद आफ्नो बाइक पछाडि को गिरावट।
एक लागि बिजुली skateboarder , म जस्तै एक परम्परागत स्केट टोप गर्छ आफ्नो टाउको को पछाडि कवर एक टोप रही सिफारिश थियो। आफ्नो बोर्ड चाँडै बढाउने क्षमता छ किनकी, तिमी बन्द हालियो सकिएन र पिछडिएको तपाईं misjudge यदि तपाईं कत्तिको लागू हुनुहुन्छ भल्ब।
नियमित स्केट टोप र बाइक टोप बीच अन्य प्रमुख फरक प्रभाव विभिन्न प्रकारका विरुद्ध सुरक्षा गर्न सक्ने क्षमता छ। , परम्परागत गैर-प्रमाणित, स्केट हेलमेट धेरै सानो प्रभाव पार्ने विरुद्ध सुरक्षा एक नरम फोम खोल डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ। यसको विपरीत, बाइक टोप एक कठिन तपाईं टोप प्रतिस्थापन गर्न आवश्यक जो पछि, एक ठूलो प्रभाव लिन र तोड डिजाइन गरिएको छ कि ईपीएस फोम बाहिर बनेको छ।
हुनत परम्परागत स्केट हेलमेट, सामान्य skateboards र लागि डिजाइन विद्युत longboards , अक्सर प्रमाणित छैन, तपाईं एक स्केट टोप नै कठिन ईपीएस फोम बाइक टोप छ, अझै पनि आफ्नो टाउको को पछाडि सुरक्षा प्रयोग प्राप्त गर्नुपर्छ। जो स्केट हेलमेट तिनीहरूले CPSC प्रमाणित निश्चित गरेर यसरी डिजाइन तपाईंलाई सजिलै बताउन सक्छ।
म के टोप किन्न गर्नुपर्छ?
म मेरो टोप पुस्तिका मा सूचीबद्ध गर्नुभएको हेलमेट को सबै CPSC प्रमाणित र आफ्नो टाउको को पछाडि सुरक्षा गर्न डिजाइन हो। लामो तपाईं एक प्रमाणित टोप पनि आफ्नो टाउको को पछाडि सुरक्षा छ सुनिश्चित रूपमा, तपाईंले धेरै सुरक्षित हुनेछ बिजुली skateboar घ.